Yiyiphi iRobins Isifundisa -Impembelelo evela kwiingelosi
Isifundo samandla kunye noluntu
Kwiminyaka emininzi edlulileyo ndisekhaya ekhaya ngobusuku obusika obusika obunobusika kwaye mna ndiziva ndedwa. Ndaqala ukukhala ndibizele iingelosi . Emva koko, ndeva intaka iqala ukucula ngaphandle kwewindow yam yokulala. Ndandiyazi ukuba wayandixelela, "Awuyedwa yedwa.
Iintaka Njengezigidi Zomoya
Iintaka zi nokuba kwaye zihlala zisetyenziswa njengezithunywa ezivela kwiingelosi nakwezinye izidalwa eziphezulu. Iintaka zenzeke ukuba zibonakalise rhoqo ukuba izakhiwo eziphezulu zizithumela umyalezo.
Iintaka ezisetyenziselwa ukuthumela imiyalezo ziyahlukahluka kumntu wonke. Kodwa kum, xa ndibona i-hawk okanye i-falcon ndiyazi ukuba kufuneka ndijonge iinkcukacha ezincinci kum, kuba ziya kuba nenjongo. Ndisoloko ndibona ezi ntaka zikhulu zindiza phezu kwendlu yam xa ndibandakanya kwiseshoni yokuphilisa enempilo. Iindlala ziye zadlala indima ebalulekileyo kum. Ziyabonakala ekuhambeni kwam ndoda ngexesha lokuguqulwa kwamanye amazwe kwaye zihlala ziindwendwe ezihlala ekhaya. Enyanisweni, njengoko iloli elihambayo laqhubela kwikhaya lam elitsha umgca wendiza yaza yafika kwimithi eyayijikelezile kwaye yayibukela yonke ingqungquthela. Emva koko babuya imihla ngemihla ngeveki yokuqala bobabini bangibingelele baze bathathe inqanaba lam. Zizidalwa ezihlakaniphile.
Abanye abantu bavame ukuba nabathunywa abaninzi beentaka kunabanye. Konke kuxhomekeke kumntu, amandla akhe kunye naziphi na izinto ezihambelana nazo. Abantu abanezibonakaliso ezininzi zomoya kwichati zabo zeenkwenkwezi bavame ukuthunyelwa ngabahlobo bethu abanamaphiko.
UAlonya, uncedo lwengelosi yam, uxelela abantu abaneempawu ezininzi zomoya "eziphambili ngokwengqiqo" ezibhekisela ekubeni zihlala emzimbeni wengqondo kunokuba zithinteke ngokomzimba okanye ngokomzimba.
Ndisebenze iminyaka idibana nezilwanyana ezisebenza njengomoya okhokela abantu. Umoya wesilwanyana ngasinye unomyalezo oyingqayizivele kumntu ngamnye.
Ngenxa yoko ndiziva iincwadi malunga nokuxhamla kwezilwanyana kufuneka zisetyenziswe ngakumbi njengezixhobo ngaphezu kobukhulu obufanayo buhambisana nayo yonke imiyalezo. Ulwazi olukwincwadi alukwazi ukuthatha indawo yokudibanisa nomoya wezilwanyana ozikhethele wena ukufumana ukuba yeyiphi imilayezo abanayo kuwe.
Ndidibene nomphangi ondikhokelayo kwaye undixelele ukuba zonke iidolin zivame ukuzisa ukufundisa kunye nesigidimi sothando kunye nosapho. Badlala, banengqiqo, bayazikhandla kwaye balindile. Basifundisa uluntu kunye nendlela yokusebenzisana kunye neyunithi ukukhuseleka. Basifundisa ukuba sithande kwaye kusikhumbuze ukuba sizonwabisa kumsebenzi wethu wemihla ngemihla. Umyalezo we-robin udla into enokuyenza ngokugcina ubungqina bethu kunye nobumnandi bobomi phakathi kobomi bentsapho kunye nemisebenzi.
Ukuba uye wafumana ukutyelelwa ngu-robin Ndiyincoma ukuba uchithe ixesha elixhomekeke kuloo robin. Unokwenza oku ngoxolo okanye ngokuvakalayo nokuba le ntaka ayikho kummandla wakho wombono. Unokuyihlonela ngokuba ngumthunywa. Khangela ukuba iziphi i-robins zifuna ukutya kwaye zikhuphe izinto ezizithandayo. Ncedisa amanye ama-robins okanye nikele kwimibutho enceda ama-robins nezinye iintaka ezifana neengcwele zeentaka kunye nabahlaziyi bezilwanyana zasendle.
Yonke le mi sebenzi iyakwazi ukuqonda yonke into eyenziwa yiinyoni kwaye iya kubangela ukuba uqhagamshelane kubo.
I-robin encinci, kunye nama-quirks, isithunywa esithunyelwe yi-Divine kunye neengelosi ukukhumbuza ukuba awuwedwa. Nangona ngaphakathi ngaphakathi apho uzive ukhuselekile awukho wedwa. I-robin ifuna iqabane lokuchitha ubomi balo bonke kunye nokudala intsapho kunye nekhaya. URobins ushiye ikhaya ukuba ahambe kwaye ahlanganisane njengommandla. Bamele baphume kweli lizwe elikhulu kwaye kuthatha onke amandla abo ukwenza njalo. Bafunda ukuthembela kunye nokuthembela kuluntu lwabo oluthile ukuze bafumane ukhokelo, ukuze bancede, badlale, kwaye bahlonywe. Unyaka wonke baya kubuya endaweni abazalelwa ngayo kwaye benze ikhaya kunye nosapho kunye neqabane labo. Yonke loo nto ukusuka kuloo nto i-robin encinci.
I-robin yakho izisa umyalezo wamandla. Ikhumbuza ukuba ungalokothi ushiye kwaye unamandla. Yiba nokholo ngamandla akho nakwikamva lakho. I-robin yakho ilapha ukukufundisa ukuba ingabonakali kangangoko, kodwa ihlabathi likhuselekileyo.
Iingcebiso zokwenza ukuPhulukiswa okude
Ukuguqulwa kweSikolo sakho kunye noKwenziwa kokwenziwa kwezigqibo
Iidolophu eziPhambili kunazo zonke kwihlabathi
Hardbat vs Sponge kwiTable Tennis / Ping-Pong - Yiyiphi engcono?